आज तपाईं हाम्रो ध्यान लागि बच्चाहरु घुमक्कड प्रदान गरिनेछ Geoby C780। इमानदार हुन, हाल यो उत्पादन सबै ग्राहकहरु बढी र थप प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सुरु हुन्छ। तर तिनीहरू सबै मिश्रित छन्। त्यसैले, यो सही हुन सक्दैन र चाँडै हामीलाई वा अगाडि राम्रो उत्पादन निर्धारण। तर हामी यसलाई तपाईं के गर्न प्रयास गर्नेछ। आखिर, बच्चालाई एक पैदल लागि घुमक्कड को विकल्प - यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो। गलत निर्णय आमाबाबुले समस्या धेरै दिन हुनेछ। र त, तिनीहरूलाई जोगिन हामी खरीदारों को विचार, साथै विनिर्देशों थाहा हुनेछ घुमक्कड Geoby C780।
निस्सन्देह, सबै छोराछोरीको फर्नीचर, साथै सबै वाहन उमेर सीमा छ। र तिनीहरूले सधैं विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छन्। आखिर, यस्तो दृष्टिकोण आफ्नो बच्चा को अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ। Geoby C780 - वास्तवमा कुनै पनि उमेर लागि उपयुक्त छ जो घुमक्कड। तर पनि यहाँ केही सीमितता छन्।
जो मान्छे? यो मोडेल6महिनाका शिशुलाई लागि विशेष डिजाइन गरिएको छ। एक बच्चा यो समय सम्म व्हीलचेयर बिना हिंड्न राम्रो छ। वा अन्य मोडेल चयन गर्नुहोस्। थप सरल, तर विश्वसनीय। यो सबै, माथि6महिना यसलाई साँच्चै घुमक्कड बिना जाने सुविधाजनक छ। तर त्यसपछि यो अवश्य छ। यो पनि छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ घुमक्कड Geoby C780 पनि3वर्ष को उमेर मुनिका बच्चाहरु लागि डिजाइन गरिएको छ। लगभग बोल्ने, हामी किन्न र विकल्प को समस्याको बारेमा बिर्सन्छन्। र यो वास्तवमा धेरै आमाबाबुले खुसी छ।
के हामी विशेष योग्य उत्पादनहरु को एक नम्बर मा यो मोडेल strollers विचार ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ? उदाहरणका लागि, चेसिस मा। यो कुरा यो धेरै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भन्ने छ। उहाँले अक्सर भण्डारण र प्रत्यक्ष चल्छ लागि कसरी सहज घुमक्कड जवाफ मद्दत गर्छ।
Geoby C780 मा, धेरै साथीहरूले जस्तै,4पाङ्ग्रा - दुई अगाडि र दुई पछि। तिनीहरूले हटाउन सकिने र inflatable छन्। यो एक विशाल फाइदा छ। आखिर, यस्तो पाङ्ग्रा को हेरविचार धेरै सजिलो र सुविधाजनक छ लिन्छन्। चेसिस 58 सेन्टिमिटर लामो र अक्षहरूमा समायोजन गर्ने क्षमता छ। को पाङ्ग्रा बारी र ब्रेक धारण आवश्यक भएमा।
घुमक्कड Geoby C780 खिलौने, कुरा र उत्पादनहरु को धेरै राम्रो टोकरी को तल संग सुसज्जित छ। र "पुस्तक" त्यहाँ यस्तो मोडेल छ। यो पनि धेरै सुविधाजनक छ। र, कडाई बोल्ने, संकुचित छ।
यो पनि जब यो उद्देश्य लागि एक घुमक्कड छनौट सीट एकाइ ध्यान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा Geoby C780 को backrest संरचना समायोजन गर्ने क्षमता, साथै तत्संबंधी प्रावधान धेरै छ भन्ने छ। सबै तीन तिनीहरूलाई को।
घुमक्कड Geoby C780 पनि नरम "गद्दी" र बच्चा अगाडि पट्टी संग पाँच-बिन्दु सुरक्षा बेल्ट संग सुसज्जित चलाउँछ। त्यहाँ पनि उचाइ समायोज्य footrests छ। अब संभावना प्रत्येक ढुवानी टाढा छ।
इमानदार हुन, सीट एकाइ एकदम सुविधाजनक छ। धेरै आमाबाबुले सडक मा एक बच्चा हिंड्न हिड्ने जब यो Geoby C780 तिनीहरूलाई आनन्दित दिनुभएको दाबी गर्छन्। आखिर, यो मोडेल उपयोगी मात्र होइन आमाबाबुले, तर पनि छोराछोरीलाई छ। कहिलेकाहीं केही परिवार केही भारी संरचना को गुनासो। तर इमानदार, वास्तविक घुमक्कड एकदम ठूलो विशाल र Multifunctional हुनुपर्छ। बस यो हाम्रो वर्तमान मोडेल छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा - को घुमक्कड संलग्न पर्छ भनेर यो थप वस्तुहरू। हो, केही मोडेल "जाने" छन् तिनीहरूलाई बिना, सबै थप पछि किन्न छ। यहाँ मात्र घुमक्कड Geoby C780, जो प्रतिक्रियाहरू हामी पछि एक सानो सिक्न छौँ गर्न, विभिन्न अतिरिक्त र आवश्यक कुराहरू धेरै समावेश छ।
उदाहरणका लागि, बच्चा को उपकरण आन्दोलन गर्न पूर्ण विशेष छ हतियार लागि स्लिभ आमा। विशेष गरी हिउँदमा चिसो मौसम मा एक धेरै उपयोगी कुरा। एक सूर्य छज्जा, एक लामखुट्टे नेट, raincover पनि छ। पाङ्ग्रा पंप प्रदान गरिएको छ। साँचो, Geoby C780 एउटा कारण लागि संदिग्ध समीक्षा प्राप्त - कुनै ढुवानी पूरा गर्नको लागि। दुर्भाग्यवश, कहिलेकाहीं यो खरीद देखि जवान आमाबाबुले धक्का क्षमता को उनको कमी छ। वास्तवमा, यी बिना कुराहरू जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। तर केही असुविधाहरु संग।
Geoby C780 एक पूर्ण बिभिन्न रंग प्रदान गर्दछ। हो, स्पेक्ट्रम छ छैन यस्तो विशाल र व्यापक, धेरै अन्य व्हीलचेयर जस्तै। तर, तैपनि, यो अझै पनि पर्याप्त छ। बालक वा केटी - कहिले काँही तपाईं पैदा हुनेछ जसले बारेमा सोच बिना अग्रिम एक घुमक्कड खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सबै रंग पछि Geoby C780 एक निश्चित लिङ्ग, र बहुमुखी दुवै छ छ।
हाम्रो प्रस्ताव आज घुमक्कड को दायरा के हो? ती हुन्:
सबै रंग धेरै उज्ज्वल, तर धेरै सुन्दर छैनन्। तिनीहरूले धेरै हडताली छैनन्, तर डिजाइन भव्यता र आकर्षण दिन। बस के खेल मैदान मा त आवश्यक छ।
Geoby C780 प्रतिक्रिया धेरै मूल्यांकन मापदण्ड पाए। र आज हामी तपाईंसँग छन् तिनीहरूलाई सिक्न। मूल्य श्रेणी - का सबैभन्दा लोकप्रिय र महत्वपूर्ण कुरा सुरु गरौँ।
कुनै पनि घुमक्कड, विशेष गरी पैदल, क्रमशः खर्च गर्नुपर्छ। तर, मूल्य ट्याग अक्सर overstated छ। निर्माता, ब्रान्ड वा उपकरण को भूमिका त्यहाँ खेल्न सक्छन्। हाम्रो वर्तमान मोडेल, इमानदार हुन कि बाहेक, यो वाहनो औसत लागत एक नम्बर मा आवश्यक छ। यो रूपमा पनि देखावटी मूल्य बारे गाली गर्न हामी चाहनुहुन्छ रूपमा कम, तर यति उच्च छैन छैन।
औसत मा, पैदल विकल्प बारे 12-13 हजार rubles लागत। हामी एक पूर्ण सेट, साथै मोडेल को क्षमताहरु केही रूपमा विचार भने, हामी मूल्य ट्याग सामान्य छ भनेर भन्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो धेरै समीक्षा बीचमा सधैं overvalued मूल्य ट्याग बारेमा चिच्याउने गर्ने disgruntled आमाबाबुले फेला परेन। यो आवश्यक छैन तुरुन्तै तिनीहरूलाई सुन्न छ। तर पनि विश्वसनीय हुन र एक मूल्य र निर्माण को एक उत्कृष्ट गुणस्तर पनि कम को बोल्ने ती छैन। अब हामी वास्तव मा एक Geoby C780 छ, तपाईंलाई थाहा।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा गर्दा एक व्हीलचेयर छनौट - यो आफ्नो गतिशीलता छ। केही मोडेल विशाल भण्डारण ठाउँ आवश्यक र त्यहाँ एक ठाउँबाट अर्को गर्न ढुवानी को डिजाइन केही कठिनाइ छन्।
घुमक्कड Geoby C780 गतिशीलता को मामला मा धेरै सकारात्मक समीक्षा हुन्छ। को "विस्फोट" राज्य, यसलाई बरु भारी र ठूलो देखिन्छ। यो सामान्य हो। एक मोडेल, भन्नुभयो गरिएको छ रूपमा, "एउटा किताब।" हुन्छ यो दृष्टिकोण कम्पैक्ट घुमक्कड बनाउँछ। कि भेला अवस्थामा घर छ, यो धेरै ठाउँ लिन छैन अप।
निस्सन्देह, यो घुमक्कड Geoby C780 सकारात्मक समीक्षा र अपेक्षाकृत यातायात प्राप्त गर्दछ। बिन्दु एक मोडेल सानो पदचाप एक पटक, यो सजिलै एक कार को ट्रंक मा फिट गर्न सक्ने छ। र यो धेरै खुसी दुकानदारों छ। तपाईं सजिलै घरेलु गर्न वा यात्रा मा एक घुमक्कड लाग्न सक्छ। यो सबै यातायात को प्रश्न कुस्ती गर्न छैन। घुमक्कड पछि Geoby C780 संकुचित र मोबाइल छ।
सामान्य मा आफ्नो बच्चाहरु को लागि कुनै पनि राम्रो वाहन, सहज हुनुपर्छ। आमा को लागि र बच्चाहरु को लागि। एकदम अक्सर घुमक्कड Geoby C780 यो सूचक आदर प्राप्त समीक्षाएँ। शायद यो हरेक अभिभावक टिप्पणीहरू यसको फाइदा र बेफाइदा आदर।
धेरै हाम्रो वर्तमान मोडेल आमाहरु र dads लागि धेरै सुविधाजनक र बच्चा को लागि पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने तर्क। यो विशाल बहु-कार्यात्मक, तर अझै पनि किरा थप उपकरणहरू संग सुसज्जित छ। त्यो छ, कुनै पनि मौसममा, तपाईं सजिलै परिस्थितिको समायोजन गर्न सक्षम हुनेछ: र वर्षा सूर्य ले आफ्नो बच्चा जोगाउन र रक्षा।
साथै, धेरै पटक यो Geoby C780, फोटो आमाबाबुले ठूलो खुशी साथ राख्न जो, जहाँ बच्चा छ, "बसिरहेका" को स्थिति समायोजन मामलामा एकदमै सुविधाजनक छ भनेर याद थियो। को इच्छा र बच्चा को आवश्यकता मा आधारित स्थापित छ प्रत्येक जो तीन सम्भव भेरिएसनहरूमा। यो विशाल र सुन्दर घुमक्कड आफ्नो बच्चा, बस्न सक्छ निद्रामा र बस आराम।
हिड्ने - यो सारा प्रक्रियाको अंश मात्र हो। व्हीलचेयर छनौट र पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका कसरी सजिलो हेरविचार डिजाइन मा एक कारक खेल्छ। अधिक परिसर धुने र घुमक्कड हेरचाह, त्यसैले यसलाई खराब छ। र, पाठ्यक्रम, यस्तो मोडेल चाँडै सबै भन्दा राम्रो प्रतिष्ठा कमाउन छैन।
तर C780 Geoby छैन। प्रायजसो, सकारात्मक, यो उत्पादन बारे समीक्षा। र आदर पनि ख्याल गर्न। धेरै कपडा घुमक्कड। र यो सबै संग, यो सफा गर्न सजिलो छ। हटाउन सकिने, inflatable पाङ्ग्रा। तिनीहरूले पनि सफा गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। साथै, सेट पाङ्ग्रा लागि विशेष सुझावहरू समावेश छ। तिनीहरूले अत्यधिक माटो बाट पाङ्ग्रा राख्न सक्षम छन्।
कहिले काँही, घुमक्कड सफा गर्न, बस एक नम कपडा संग हटाउन। र सबै माटो हटाइएको छ। सुकेको घुमक्कड चाँडै लगभग तुरुन्त dries। र यो धेरै समय बचाउँछ। तसर्थ, आमाबाबुले हाम्रो वर्तमान विकल्प फर्नीचर र अन्य तेस्रो-पक्ष सामान हेरचाह गर्न साना समय भएका युवा Mums, लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्।
यो एक घुमक्कड छनौट जस्तै निर्माण गुणस्तर को एक सामान्य विवरण रूपमा कारक हुँदा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मापदण्ड छ। यो कुरा विकल्प धेरै साँच्चै, मोबाइल छन् तिनीहरूलाई हिंड्न सफा गर्न सजिलो, सहज छ, तर आफ्नो गुणस्तर विशेष राम्रो छैन। तिनीहरूले दरार सुरु चाँडै तोड्न "माथि कार्य।"
हाम्रो वर्तमान घुमक्कड बारेमा हामी के भन्न सक्छौं? आमाबाबुको बहुमत तिनीहरूले खरिद पछि पायो परिणाम संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि शायद मात्र वास्तवमा। अक्सर, यो मोडेल बच्चाहरु को केही पुस्तामा "बाँच्न" गर्न सक्षम छ। तर, केही सीमितता छन्। र तिनीहरूले पालन छैन भने, तपाईंले लामो सेवाको लागि आशा गर्न सक्दैन।
यो के हो? 20 किलो भन्दा छोराछोरीलाई लागि कि घुमक्कड इरादा छैन भन्ने तथ्यलाई। सिद्धान्त मा, बच्चा सम्म समय अवधि वाहनो outgrows, यो सिर्फ धेरै रूपमा वजन हुनेछ। यो अक्सर अनावश्यक क्षति देखि मोडेल रक्षा गर्न मद्दत गर्छ। साथै, कुनै पनि धक्का वा भूमि कुनै डर छ - Geoby C780 तपाईं बिल्कुल कुनै पनि सतह मा सार्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि, यो (, सुपरमार्केट मा उदाहरणका लागि) एक गर्म थाली मा सावधान हुन आवश्यक छ - तपाईं कहिलेकाहीं घुमक्कड सिधै पर्ची गर्न सक्छन्। डिजाइन जाने छैनन् टाढा - यो ठाउँमा रहनेछ। तर आमाबाबुले ढुवानी को गिरावट मा प्रहार गर्न सकिएन। सावधानीहरु पूरा? त्यसपछि तपाईं स्थायित्व र उच्च गुणस्तरीय सेवा वाहनो भरोसा गर्न सक्छन्।
यो किन्न चाहे - समीक्षा गरेपछि सबै समीक्षा त्यहाँ एकदम सामान्य प्रश्न छ, छोराछोरी को लागि आकस्मिक डिजाइन Geoby C780 ठेगाना भने? मूलतः, यो हरेक अभिभावक आफूलाई लागि निर्णय हो। शायद उहाँले यो मोडेल मा केहि रुचि थिएन। हो, र उनको बरु ठूलो को वजन - 14.2 किलो।
मूलतः, तपाईं डिजाइन र यसको मूल्य खुलारूपमा आपत्ति छैन भने, तपाईं व्हीलचेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईं सेवा गर्नेछन् लामो समय देखिन्थ्यो। इमानदार हुन, यो पाउन र सस्ता विकल्प अब सम्भव छ। तर तपाईंले महत्त्वपूर्ण ब्रान्ड र गुणस्तर भने, "Geobi" - सबै भन्दा राम्रो उपाय हो।
कपाल पानासोनिक ER131 लागि मिसिन: वर्णन, निर्देशन, समीक्षा
फिलिप्स पालना एउटा उदाहरण रूपमा धूर्त
Laminate लागि MOP: चयन र प्रयोग विशेषताहरु
गणित मा मध्य समूहमा अन्तिम गतिविधि र चित्रकला: योजना, सार
दुई बालिका लागि बच्चाको कोठा को भित्री छनौट
Konstantinov पार: मूल्य फोटो
सहोदर समुद्र। मनोरंजन माछा मार्ने
मानव मस्तिष्क काम। केही "तार" को लागि मस्तिष्क सन्देश हुन्छ?